Abavelisi bokucoca indlu yonke-abaThengisi beNdlu yonke abaThengi kunye neFektri
I-5762-PF5A Umsebenzi onzima onokuphinda usebenzise indlu yoCoca uManzi
Inkqubo esebenzayo yokuhlanjululwa kwamanzi kumakhaya okuhlala okanye iiofisi, ngakumbi ezenzelwe ukubamba amasuntswana amakhulu emanzini, ukukhusela izixhobo zombane kunye nemibhobho evela kwintlenga.
Ifanelekile kwi-4.5 "× 10" ye-PP / iphepha lokucoca ulwelo / umtya wokucoca ulwelo ukunciphisa intlenge, umhlwa, isanti, ubumdaka, ulwelwe, ii-colloids, iimpethu ezibomvu, njl.
Iimpawu ezinganyangekiyo kakhulu kunye ne-NSF eqinisekisiweyo yeefluji zecrafri
Iikhatriji zethu zokucoca ulwelo ezitshintshayo ezingama-4.5 zinokuthengiswa ngokwahlukeneyo okanye zidibane nenkqubo.
5290 Backwash Ukusebenza okuPhezulu kweNdlu Inkqubo yokuHlulwa kwaManzi kwakhona
Inkqubo esebenzayo yokuhlanjululwa kwamanzi kumakhaya okuhlala okanye iiofisi, ngokukodwa ezenzelwe ukubamba amasuntswana amakhulu emanzini, ukukhusela izixhobo zombane kunye nokufaka amanzi kwi-sediment.
Sebenzisa umnatha wentsimbi ongenasici ukunciphisa intlenga, umhlwa, isanti, ubumdaka, ulwelwe, ii-colloids, iintshulube ezibomvu, njl.
Medical-grade 316 enemingxuma insimbi inokuqinisekisa ngqo eliphezulu kunye nokusebenza filtration ngcono.
Izindlu ezenziwe ngeepolymer zinokuthintela ukuqhuma kunye nokubanda.
Ukusebenza okuphezulu kokuhamba kwamanzi iitoni ezi-3 ngeyure (phantsi koxinzelelo lwe-0.3MPa).
Ukusebenza ngokukuko okuPhezulu okuSebenzayo okuSebenzayo kwiNdlu yonke
Ukusebenza okuphezulu kokuhamba kwamanzi iitoni ezi-3 ngeyure.
Umsebenzi oSebenzayo ka-5766 oSetyenziswayo oSetyenziswayo kwiNdlu yonke
Ilungele i-2.5 "× 10" PP / iphepha elincinyiweyo / umtya wokucoca ulwelo ukunciphisa intlenge, umhlwa, isanti, ubumdaka, ulwelwe, ii-colloids, iimpethu ezibomvu, njl.
Iikhatriji zethu zeefilitha ezingena endaweni ye-2,5 ezinokutshintshwa zinokuthengiswa ngokwahlukeneyo okanye zidibane nenkqubo.
Inkqubo yoCocu yaManzi eyi-5450
Fumana amanzi acocekileyo nasempilweni ukunciphisa ukungcoliseka kwamanzi okusela ekhaya, ukupheka, ukuhlamba, ukuhlamba impahla kunye nezinye iimfuno.
Sebenzisa i-coconut iqokobhe lekhabhon kunye ne-premium KDF ukucoca intsalela yeklorine, isinyithi esinzima kunye nezinye izinto ezingafunekiyo.
Izinto ezikumgangatho wokutya ziqinisekisa ukhuseleko kunye nempilo yeendawo ezinamanzi.
Yamkela ilungelo elilodwa lomenzi wechiza lokuchukumisa ulwakhiwo lokupasa ukuvumela iswitshi yasimahla phakathi kwamanzi acociweyo kunye nompompo wamanzi.
Inkqubo yoCocu yaManzi eyi-5451
I-5460 yokuHlaliswa kwaManzi okuPhakathi
Sebenzisa i-reson yokutshintshiselana nge-ion ukucoca ngokufanelekileyo i-calcium kunye ne-magnesium ion ukubonelela ngokuziva kakuhle kwamanzi.
Sebenzisa ilungelo elilodwa lomenzi wechiza ngokuchwetheza ngesakhiwo sokupasa ukuvumela ukutshintshwa simahla phakathi kwamanzi athambileyo kunye namanzi ompompo.
Ikuvumela ukuba uhlengahlengise useto lobulukhuni bamanzi ngokweemfuno zakho.
5461 Indawo yokuHlalisa aManzi eNdawo yokuhlala
Kufakwe kumbhobho wokungena kwaye ukhusela izixhobo zakho zamanzi kunye nemibhobho yamanzi acocekileyo kwikhaya lakho lonke.
Ukuziqhelanisa namandla okuhlala ngaphakathi kuzo zonke iintlobo zenkqubo yokuhluza amanzi endlini.
I-NSF kunye ne-WQA ziqinisekisiwe ukususa ukungcola okufumaneka emanzini, kubandakanya intlenga, isanti, ubumdaka, umhlwa kunye nezinye izinto ezinkulu.
Umbala wokugqibela weeminqwazi unokwenziwa ngokwezifiso zakho.
Inxeba yomtya Wokutshintshwa kweKhaya liphela
Iifiliji zokucoca ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye nokulinganiswa kwemicron.
Indlu yonke yoLulutho lweeNdawo eziCoca iMeltblown
Iifiliji zokucoca ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, umlinganiso we-micron kunye nonyango lokuphela (i-layered, grooved, njl.
Hluza iCartridge, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis,